Methenolone acetate (Primobolan) poids (434-05-9) hplc≥XUMX% | AASraw
/ Products / Anabolika Steroids / Meny fitetezana / Methenolone Acetate (Primobolan) poids
SKU: 434-05-9. Sokajy: Meny fitetezana, Anabolika Steroids
Ny AASraw dia miaraka amin'ny synthesis sy ny fahaiza-manao manomboka amin'ny gram ka hatramin'ny filahatry ny metenolone Acetat (Primobolan) (434-05-9), eo ambany fanaraha-maso CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Vidin-drivotra metenolone acetate (Primobolan)
Karazam-barivaron'ny Methenolone Acetat (Primobolan) roapolo fototra
Name: Methenolone Acetate (Primobolan) poids
Meny fitetezana 344.48800
Ahitra amin'ny Methaneolone Acetate roan-jato (Primobolan) amin'ny tsindrona steroides
Ny vovon-ketsa métenolone dia fantatra ihany koa amin'ny Primobolan (CAS 434-05-9), Primo A, Primo Ace.
Rovan'omby vita amin'ny Primobolan
Tokony hosotroina ny vovony akeneta metenolone. Ho an'ny lehilahy, ny mpikirakira matetika dia mitondra 50-100mg isan'andro, Ny mpampiasa mpampiasa dia mahazatra 100-150mg isan'andro, ny mpampiasa efa ela dia mandray 150-200mg isan'andro, tsy mihoatra noho ny 6-8 herinandro, Ho an'ny vehivavy, matetika 25-50mg na 50 -75mg isan'andro. Ary tsy mihoatra ny herinandro 4-6,
Fampitandremana amin'ny vovoka Primobolan vita
Na dia misy steroid aza, ny voka-dratsin'ny poezia météronique acetate dia mety ahitana fanehoan-kevitra mahery vaika sy adinon'aretina mahery vaika. Ny androm-piainan'ny androgenic dia misy ny akne, haingana ny fihenan'ny volo eo amin'ny toeran'ny fitombon'ny lahy sy ny vavy ary ny fitomboan'ny volo.
Anisan'izany ny olana momba ny kolesterola, toy ny fampitomboana ny kolesterola LDL, indrindra fa ny fihanaky ny cholesterol HDL na ny fihenam-bidy.
Ankoatra izany, ny steroid rehetra anabolika dia manakana ny famokarana testosterone voajanahary Na dia mampihena aza ny famokarana testosterone voajanahary, ny tovovavy metenolone acetate (CAS 434-05-9) dia tsy mahery noho ny steroids maro anabolic.
Ao amin'ny sehatry ny fitsaboana, ny vinaingitra Methetolone Acetate dia ampiasaina mba hikarakarana ny olona mijaly amin'ny toe-piainana izay misintona ny fihinam-boa sy ny fatiantoka mavesatra dia famantarana. Ny fampiasana hafa dia ny: ny fiovaovan'ny tosi-drà ho an'ny tsirairay amin'ny ady amin'ny aretina, ny fialana amin'ny toetr'andro, ny fanoherana ny vokatry ny fitsaboana kortikosteroid efa ela, ary ny fitsaboana ny osteoporose sy ny sarcopenia (ny faharetan'ny hozatra mifandray amin'ny fahanterana). Ny vovonan'aretina metenolone, toa an'i Anavar, dia hita fa malemy amin'ny fiantraikany ratsy amin'ny fampiasana zaza sy zaza koa mba hampiroboroboana ny fahazoana lanjany amin'ny zaza vao teraka tsy misy fampidiran-dra na voan'ny toaka  . Ny olona iray dia mora mahita ny toerana misy ny fitsaboana an'io anabolic steroid io avy amin'ny fiarahamonina ara-panatanjahan-tena sy ny bakteria, satria izy io dia fampifandraisana miteraka vokatra malemy ary tsy dia misy fiantraikany.
Kaomina mivantana ny môtônôlônika
Ahoana no hividianana vinaingitra metenolone acetate (CAS 434-05-9), mividiana ny vovoka Primobolan avy ao AASraw
Ny AASraw dia manome ny fahadiovana 98% Methenolone Acetate volo volo ho an'ny mpanao biriky na laboratoara ambanin'ny tany ho fampiasana am-bava.
Resin-tsakafo môtônôlônina vita amin'ny môtônôlônina
Ny vovoka Primobolan - ny steroid avo indrindra